Database | Saturngod
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged Database, nosql on February 4, 2013 by saturngod. Wow… JSON
3 Replies JSON ကို ကျွန်တော်တို့တွေ နေရာစုံမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်သိတာက JSON ကို web service တွေမှာ အဓိက သုံးတယ်ပေါ့။ တကယ်တန်းတော့ မဟုတ်ပါ။ နေရာစုံမှာ သုံးနိုင်တယ်။ လိုအပ်သလို သုံးနိုင်တယ်။ အမြဲတန်းသုံးရမယ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းမှာ သင်ခဲ့တုန်းက Database Design ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ 1NF , 2NF , 3NF ထိ သင်ဖူးပါတယ်။ သိပ်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ 3NF ထိလို့ထင်တာပဲ။ တကယ်တန်းတော့ 6NF ထိရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲလောက်ထိ မသုံးကြဘူး။ 3NF လောက်ထိ သိရင် အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် JSON ကို သုံးပြီး Table တွေ လျော့ချဖို့ သို့မဟုတ် field တွေ လျော့ချဖို့တွေ မသင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတွေက အတွေ့အကြုံတွေက သင်လာခဲ့တာပါ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Database, json, PHP, XML on February 18, 2010 by saturngod. Search for: